UMnu u-Mohamed Hoosen Suleman ekhuluma ngokuba manqika kothisha ukugoma.
UMnyango Wemfundo Eyisisekelo usubone inselelo yokuba manqika ukugoma kothisha emkhankasweni wawo wokugoma. Ukweseka lo mkhankaso nokukhuthaza othisha ukuba bagome, umfundi owesenza unyaka wesithathu kwezobudokotela e-UKZN uMnu u-Mohamed Hoosen Suleman simenywe ukuthi sizokhuluma nothisha abangama-45 baseningizimu yeTheku.
Umkhulumeli woMnyango uMnu u-Elijah Mhlanga uchazele othisha ukuthi kungani kumqoka ukugoma, wabakhuthaza nabanye abasebenza esikoleni ukuthi bagome. Uhlelo lomnyango lokugoma nge-Johnson and Johnson kumanje luyaqhubeka ezweni lonke.
Inkulumo ka-Suleman, ebinesihloko esithi: The need for vaccines, now more than ever, ichaza ngobumqoka bokugoma njengoba sekukhona uhlobo olusha lwegciwane le-COVID-19. Inkulumo yakhe ibheke umlando wegciwane nokuthi sesihambe kangakanani ukubhekana ne-COVID-19 emhlabeni nasezweni. Ugcizelele ubuhle bokugoma, wathi izingozi zokugoma zincane kunobuhle bakho. ‘Izigameko zokushuba kwegazi nezifo zokuvuvukala kwenhliziyo zincane kakhulu ngokwezibalo kanti akufanele zivimbe abantu ukuthi bagome.’
U-Suleman, owaphasa ngamalengiso iziqu zefamasi, uchaze ngemininingwane ekhona ngemigomo ye-COVID-19 nobumqoka bokulwa nemibiko engamampunge nedukisayo. Ukhuthaze abantu ukuthi bathole ulwazi emithonjeni esemthethweni nehloliwe.
‘Inkulumo yami ithakaselwe, abaningi babuza imibuzo ngezinhlobo ezihlukene zemigomo. Ukwazi nokuchaza ngokuphepha nokusebenza kumqoka ekwenzeni ukuthi imigomo yemukeleke. Abasebenzi bezempilo banejoka lokubhekana nezinselelo uma ziqhamuka. Ukuba manqika ukugoma kudinga ukusukunyelwa ngendlela efanele ngoba kuyinselelo emizamweni yethu yokuqeda ubhubhane,’ kusho u-Suleman.
Wengeze ngokuthi indlela ecacile nesebenzayo yokwazisa ngemigomo ye-COVID-19 yinto emqoka neseqhulwini. Uthe: ‘Ukusabalalisa ulwazi oluhloliwe ngendlela ebonakalayo kuzokwenza abantu ukuthi bethembe. Umkhankaso wethu kwezempilo wukuqinisekisa ukugwema igciwane nokuhlenga impilo. Sisebenza ngokubambisana, singayinqoba i-COVID-19.’